Uganda Oo Ciidamo Cusub Usoo Dirtay Soomaaliya |
Uganda –War kasoo baxay Taliska Ciidamada difaaca Uganda ee UPDF ayaa lagu xaqiijiyay in 1,800 [Kun iyo sideed boqol] oo askari loo soo diray dalka Soomaaliya, Arbacadii lasoo dhaafay.
Ciidanka cusub ee imaanaya Soomaaliya ayaa howlgalkooda noqon doonaan kahor taga khatarta weerarada Al-Shabaab iyo inay gacan ka geystaan soo celinta nabada iyo xasiloonida dalka oo kasoo kabanaya dagaallo mudo dheer socday.
Gen. David Muhoozi oo ah taliyaha ciidamada Uganda ayaa kula dardaarmay Askarta inay muujiyaan karti dheeraad ah si uu uu guuleysto howlgalka loogu soo diray Soomaaliya, iyagoo hoostaga howlgalka AMISOM.
Taliyaha ayaa sheegay in howlgalka Soomaaliya uusan ahayn mid fudud, sidaasi darteedna laga doonayo askarta Uganda inay sameeyaan dedaal dheeri ah oo u horseedi kara dalka ay ka howlgalayaan inuu markale cagihiisa dib isagu soo taago.
Uganda ayaa ah dalka ay ciidamada ugu badan ka joogaan Soomaaliya, iyadoo howlgalka AMISOM oo 10 sano jirsaday la doonayo in lasoo afkaro 2020, islamarkaana lagu wareejiyo mas’uuliyadda amniga ciidamada xoogga dalka.